Kedu ihe kpatara iji jiri ọdịnaya anya na Social Media? | Martech Zone
B2B Marketing Infographics na nso nso a kere ihe omuma iji lebakwuo anya na ụfọdụ ihe na-atọ ụtọ ọnụ ọgụgụ site na Heidi Cohen n'iji ọdịnaya anya na mgbasa ozi mgbasa ozi. Ọnụ ọgụgụ a nyere na-akpali akpali na atụmatụ ọ bụla nke ụlọ ọrụ gị ugbu a ga-abụ nke ihe nkiri na-achịkwa.
Ndị nkwusa na-eji infographics dị ka ngwa ahịa ahịa ha nwere ike iwelie okporo ụzọ ha site na 12%. Foto na-amasị okpukpu abụọ ka mmelite ederede na Facebook.
94% karịa echiche zuru ezu na nkezi na-adọta site na ọdịnaya nwere onyonyo na-adọrọ adọrọ karịa ọdịnaya na-enweghị onyonyo.
67% nke ndị ahịa na-atụle ihe oyiyi doro anya, nke zuru oke dị oke mkpa ma buru ibu karịa ozi ngwaahịa ahụ, nkọwa zuru oke, na ọkwa ndị ahịa.
60% nke ndị na-azụ ahịa nwere ike ịtụle ma ọ bụ kpọtụrụ azụmahịa nke ihe oyiyi ya pụtara na nsonaazụ ọchụchọ mpaghara.
37% mmụba nke njikọ aka nwere mgbe Facebook posts gụnyere foto.
A na-ahụ 14% mmụba na nyocha ihu akwụkwọ mgbe mbipụta akụkọ nwere foto. (Ha na-arịgo na 48% mgbe foto abụọ na vidiyo gụnyere.)
Tags: Infographics Ahịaanyaọdịnaya anya
Sep 13, 2013 na 3:52 PM
Ekwenyere m, oge ụfọdụ ndị mmadụ na-enwe mmasị ige ntị n’ihe karịa ịgụ ya. Kedu ihe kpatara gụọ edemede okwu 2000 mgbe mmadụ nwere ike ịmepụta vidiyo banyere ya wee chịkọta ihe isiokwu ahụ na-anwa ikwu.
Foto nwekwara ike ime ka ọdịnaya ọ bụla dịkwuo ụtọ. You ga - achọ ịgụ edemede okwu 3000 ma ọ bụ ị ga - agụ otu okwu 3000 nwere ọtụtụ foto. Azịza ya dị mfe.